NJANI 'NAPHI NA EMVA' KOKULUNGELELANISA ITALENTE YEFAIRY - ANJELICA HUSTON
uphambene max asizizo izinto
Ngaphandle kwenyani yokuba bendikhwaza kuhlobo lwenyathelo lokuphila Aladdin, Andiziva ngathi lonke uhlengahlengiso lweemovie zeDisney okanye iintsomi zimbi. Ndicinga nje ukuba eyona nto iphambili ekuphuculeni nayiphi na intsomi kukujonga ngokwenyani ukuba liyintoni na ibali, yintoni eyenza ukuba lisebenze, kunye nokufumana indlela yokuzisa umyalezo ophambili ekukhanyeni ngendlela ebandakanya umdla.
Silibonile ibali ngaphambili. Singawenza njani ngokwahlukileyo? Ukuba kukho nayiphi na imovie ekufuneka ibe yitemplate yendlela yokwenza olu hlobo lokuziqhelanisa ngempumelelo, ngo-1998 Ngonaphakade , Apho edlala khona uDrew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott, noJeanne Moreau.
Ngelixa lingasekelwanga kuhlobo lweDisney, Ngapha koko i s esekwe kwibali le ICinderella . Ibali lenzeka ngenkulungwane ye-16 yeFrance, kwaye iqhawekazi lethu nguDanielle de Barbarac (Drew Barrymore,) intombi elukhuni enesidima esincinci esizisa iincwadi zeentombi zakhe ezinjenge Utopia kaThomas More. Uyise kaDanielle usweleke ngesiquphe ngenxa yesifo sentliziyo esendleleni eya kuhambo lwakhe olulandelayo, kodwa hayi ngaphambi kokutshata noBaroness Rodmilla de Ghent ongumhlolokazi, wadlala ngokugqibelela ngu-Anjelica Huston, kwaye waba ngutata wesibini kwiintombi zakhe ezimbini, uMarguerite (Megan Dodds) noJacqueline (Jeanne) Ngaphezulu). Emva kokusweleka kwakhe, sitsibe iminyaka elishumi ngaphambili kwaye sibona ukuba ilifa liwile kumaxesha anzima, kwaye uDanielle sele engumntu waseCinderella.
Enye yezinto uKenneth Branagh Disney ahlala ehlengahlengisa isenzo ICinderella Ndizamile ukuyicacisa into yokuba kutheni uElla ehlala nomama wakhe omncinci kunye nomama wakhe omncinci nangona wayephethwe gadalala. Inkcazo enikwe apho yayikukuba uElla wayezama ukugcina imimoya yabazali bakhe iphila, kwaye incoko yathetha ukuba u-Ella wayekulungele ukunyamezela ukuphathwa gadalala kwaye angahamba. Oku akuzange kukhuliswe njengesizathu kwinto yoqobo; ubungacinga ukuba uCinderella uhlale kuba engenandawo anokuya kuyo kwaye akukho zikhetho zokwenyani.
Kwi Ngonaphakade , Babonisa ukuba ifa ligcwele abantu uDanielle awabazi kwasekuzalweni. Uhlala apho ukuze abakhathalele kwaye azame ukugcina ukutya etafileni. Siyakubona oku xa uDanielle esebenzisa igolide ayifumeneyo ukuthenga kwakhona isicaka uMaurice, owathengisa uRodmilla ebukhobokeni ukuhlawula amatyala akhe. UDanielle akakho ngokungakhathali; uzama ukukhusela okuseleyo kwekhaya analo.
Ubudlelwane phakathi kukaDanielle kunye nenkosana yakhe, iNkosana uHenry, edlalwa nguDougray Scott, buthe chu. Baqala ukudibana xa uHenry eba enye yehashe yosapho kwaye uyamngqisha ngeapile. Umnika igolide ukuba athi cwaka. Emva kwexesha, xa esiya kukhulula uMaurice, udibana noHenry kwakhona, kwaye ukuthandana kwabo kukuthandana, kodwa kunye nokuziphendukela kukaHenry ukusuka kwinkosana evukelayo, engenamsebenzi, ukuya kumntu ocingayo, onobubele, nolungeleleneyo. Abathandani iiveki, kodwa lonke unxibelelwano luyabavumela ukuba bahloniphane ngakumbi.
I-Baroness kunye neMarguerite ngamanani amnandi abonakaliswe njengamaqhinga okhohlakeleyo kunesimo esibi sosapho lomtshato. Uyabona kuRodmilla ukuba kukho isizathu esiphantse soqoqosho senkohlakalo yakhe. Ukhuliswe waba ngaphezulu kwesikhundla sakhe kwaye uzama ukwenza okufanayo.
Ixabiso lakhe lalibotshelelwe ngumyeni wakhe, kodwa emva koko wasweleka umyeni wakhe, wamshiya yedwa ejonga yonke into. Ngenxa yoko, waba nobubi ngakumbi kunokuba wayeya kuba njalo. Kuyanyanzeleka kuba uDanielle unqwenela ukuba uRodmilla angamthanda. Uyavuma ukuba ekuphela kwento awayeyifuna luthando lukaRodmilla, kuba ngoyena mama uDanielle wakhe waziwa.
ngubani owenza umculo we tarzan
Ngumzuzu omkhulu, nkqu nokuqaqadeka kukaBarrymore, kuba ibonelela ngeendlela ezininzi zokufumana iimvakalelo kulwalamano phakathi kwala manani mabini. Abangobakhweli bebali kuphela, kodwa bangumama kunye nentombi. Kuyahlaziya kwakhona ukuba uDanielle unelungu elinye losapho anokujonga kulo kuJacqueline, elinye iqabane lakhe.
Ngonaphakade kuthatha ixesha elininzi ukunika uDanielle isazisi, kunye nobudlelwane ngaphandle kwenkosana kunye nezilwanyana ezithethayo. Ungumntu opheleleyo ozama ukusinda kwihlabathi elikhohlakeleyo elithathe utata wakhe laza lamtyhalela kukungcola ngokoqobo. Nangona kunjalo, imovie iyonwabisa kunye nayo kwaye ayikhathali ukuba yinkampu okanye ubudenge. Sonke siyayazi ukuba ibali liza kuphela njani, ke masilixele ngendlela enentsingiselo.
Zonke ezi nguqu zinika ubunzulu ngakumbi kubalinganiswa abakhoyo kunye neearchetypes ngaphandle kokutshintsha imixholo engundoqo kunye nentliziyo yentsomi. Iyayihlaziya ngaphandle kokuyicoca. I-hodgepodge ye-fanfiction element nayo iyonwabisa, kuba ubona amanani embali anje ngoFrancis I, iNkosana uHenry, kunye noLeonardo da Vinci bebaleka bejikeleza le movie yamabali.
Ngonaphakade isenokungabi yinxalenye yomatshini weDisney, kodwa leyo yayiyeyona ilungileyo. Yavunyelwa ukuba ibe yinto yayo, ithathe isiseko se ICinderella ibali kunye nokukhetha ukulibalisa ngendlela entsha. Sisifundo esinokufundwa nguDisney.
(umfanekiso: 20th Century Fox)
jones soda turkey kunye ne-gravy
Isinxibo sakwa-mr rogers halloween
indawo elungileyo yovavanyo lwe-litmus
Umzi mveliso we-monster njenge-bart
ngaphezulu kwetempile tropes